Isilo sihlela umthandazo wokushweleza | IOL Isolezwe
Isilo sihlela umthandazo wokushweleza
Isolezwe / 26 November 2012, 4:37pm /
King Goodwill Zwelithini - Isilo samabandla u Zwelithini kaBhekuzulu ngesikhatghi sihlangene nabantwana baseNdlunkulu ngoMgqibelo esigodlweni eNyokeni ,eduze kwaso uMntwana Philemon no Mntwana Mbonisi ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Ingxenye yabantwana base Ndlunkulu abebenomhlangano ne Silo esigodlweni sase Nyokeni ngo Mgqibelo.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
ISILO samabandla sesikubeke kwacaca ukuthi sifuna kube nomkhuleko ozogxila ekutheni kuthandazelwe izinkinga ezifana nokwanda kokudlwengulwa kwezalukazi nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo ngoba uMvelingqangi kuyaziwa ukuthi izinto angahambisani nazo lezi.
Lokhu sikusho ngesikhathi sihlangene nabantwana baseNdlunkulu kaZulu emhlanganweni obusesigodlweni esikwaNongoma eNyokeni lapho bekuzobhungwa ngamasu okuzama ukushweleza ngezigameko ezimise kabi elakuleli nezihlupha umphakathi.
Kulo mhlangano kulapho iNdlunkulu ivumelane neSilo ngokuthi kuyomele kube nomthandazo omkhulu oyoqala mhlaka 25 kuya ku 28 Disemba ukuze kugezwe isizwe sonkana ngezinkinga ezisikhungethe.
Phakathi kwezinye izinto ebesikhala ngazo kubalwa udlame lwezepolitiki, olwamatekisi, ukuhushulwa kwezisu nezingane ezilahlwa ziphila, nalabo ababayizisulu zodlame lwakudala.
“Angeke ngikhulume ngokunye ngoba kothiwa sengithe ngoba ngiyayazi into uNkulunkulu angayifuni kodwa nabo laba abathandana nobulili obufanayo siyabakhalela ngoba kungcolile abakwenza phambi kukaNkulunkulu akwemukeleki.
“Njengenkosi yenu ngalolo suku ngiyosho ukuthi ngalo msebenzi ngithi kunina maZulu enaphakwa eNdlunkulu niyovikela isihlalo sobukhosi benu buyelani emakhaya niphumule ngokuthula nibe izingelosi ezinhle. Nalaba abasala odlameni lwezepolitiki nalaba bamatekisi ikakhulukazi lapha kwaNongoma ngiyosho ngithi yekani naningaphakiwe iNdlunkulu buyelani emakhaya imindeni iyanidinga udlame luphelile siyalugqiba kwaZulu, akuhambe konke okubi nomnikazi wakho uSathane.
“Nakulabo abasalola imikhonto ngiyothi ayihlale phansi ibambe umthetho ngoba sesidlulile leso sikhathi. Nakulabo abaklinywa onina besebancane, babafaka emigqonyeni ngiyosho ukuthi abalale ngokuthula. Nakulaba ababhizi nokudlwengula izalukazi nezingane ngiyosho ukuthi ngiyabashwelezela abayeke lento abayenzayo,” kusho uHlanga lomhlabathi.
Le nkulumo yeSilo inanelwe ngenkulu inhlokomo abantwana baseNdlunkulu abebephuma ezindlini ezahlukene ezibalelwa ku-21.
Phakathi kwabo bekukhona abaseHabeni, abakwaZulu, Manyanyeni, abaseGazini, abasoNkweni nabakwezinye izindlu zaseNdlunkulu.
Ngesikhathi sichaza iSilo sithe siyakholwa ukuthi uma kungenziwa lo mcimbi kuzoba khona umehluko odlameni nasezinkingeni ezikhungethe abantu baKwaZulu-Natal.
Sithe umkhosi waso wokweShwama ozoba kulo nyaka sifuna uhluke kakhulu ngoba ngaphambi kwawo kuyoqala uchungechunge lwemikhuleko yokugezwa kwendlunkulu iqunga nesizwe sonkana.